ubuntu ကို စသုံးခြင်း — MYSTERY ZILLION
ubuntu ကို စသုံးခြင်း
February 2009 edited June 2009 in Ubuntu
ကျွန်တော် Ubuntu 8.10 ကို စမ်းသုံးနေတယ်..။ တင်ပြီးတော့ ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူး..။ ဟိုစမ်းဒီစမ်းပဲရှိသေးတယ်။ Laptop မှာတင်သုံးတာပါ။ သိချင်တာက.. Webcam သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ Dail-up ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ..။ zawgyi keyboard တော့တင်ပြီးပြီ။ ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ...။ (eg-ctrl+shift)။ နောက်ထပ်သိချင်သေးတာက software installing ပါပဲ..:77:
ကျွန်တော် web cam ကိုတော့မသိပါဘူးဗျ ကျွန်တော်လည်းlinux ကိုခုမှစလိုက်နေတာပါဗျ
zawgyi ကိုတော့ alt နဲ့ ပြောင်းပါတယ် ဗျာ
Laptop model က ဘာ မော်ဒလ်လဲခင်ဗျ ..
webcam driver အလုပ်လုပ်လား မလုပ်ဘူးလား သိဖို့အတွက် Ekiga Softphone ကိုဖွင့်ပြီး စမ်းကြည့်လို့ရတယ်၊ နောက်ပြီး Cheese ကို install လုပ်ပြီး စမ်းကြည့်လိုရပါတယ် ..
ကြယ်စစ်ရဲ့ ပိုစ့်မှာ dial-up နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲ မေးထားတော့ ubuntu က online မရသေးဘူးထင်ပါတယ် .. အကယ်လို့ online ရမယ်ဆိုရင် update လုပ်ပေးသင့်တယ် ..
ubuntu updates က webcam river ကို fix လုပ်ပေးပြီးထားပါ ..
ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရ ubuntu 8.10 စစထွက်ချင်းတုန်းက ကျနော်သွင်းပြီး webcam က အလုပ်မလုပ်ဘူးဗျ .. အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာက ekiga နဲ့စမ်းကြည့်တော့ webcam က display ဖြစ်ပြီး skype မှာ အလုပ်မလုပ်ပဲ crash ဖြစ်တာပါ ..
ဒါပေမယ့် ခုနောက် updates မှာ fixed လုပ်ပြီးသားပါ .. ကျနော်လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လကျော်ကျော်လောက်က ubuntu 8.10 ကိုပြန်ပြီး install လုပ်ပြီး update လုပ်ပေးလိုက်တာ ဘာမှလုပ်စရာကို မလိုပဲ webcam driver က အလုပ်လုပ်ပါတယ် ..
ကျနော့်စက်ကတော့ notebook မဟုတ်ပါဘူး .. နောက်ပြီး webcam က Labtec Pro ပါ ..
ဒီလို driver တွေ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် fix လုပ်ရတာ ခေါင်းကိုက်ပါတယ် .. googling လုပ်ရတာ command line နဲ့ ကလိရတာတွေကို စတင်သုံးမယ့်သူတွေအတွက် စိတ်ရှုပ်စရာအမှန်ပါ.. ဘာပဲပြောပြော out-of-box အလုပ်လုပ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော် ..
ubuntu 8.10 ကလဲ များသောအားဖြင့် out-of-box အလုပ်လုပ်ပါတယ် .. update သာလုပ်ကြည့်ပါဗျား ..
dail-up ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ မေးတော့ ခုထိ ubuntu ပေါ်မှ internet connection မရသေးဘူးထင်တယ် .. ကျနော့်မှာက adsl connection ဆိုတော့ တကယ့်ကို easy ပါပဲ .. ထမင်းလက်ထိုးပြီး စားလိုက်ရုံပဲ ဆိုသလိုမျိုးပါ .. dial-up connection ကလည်း အမှန်တကယ်ဆိုင်ရင် လွယ်လွယ်ကူကူ ကိစ္စပြီးပါတယ် .. ကျနော်ကတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ shortcut မရေးတော့ပါဘူး .. အရင်တုန်းကတော့ cdma modem connection ကို fedora ပေါ်မှာ လုပ်ခဲ့တုန်းကတော့ တော်တော်လွယ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ခုဘန်းကျော်မှာ ဘယ်လို dial-up connection မျိုးသုံးနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်မသိလို့ ထွေထွေထူးထူးမရေးတော့ပါဘူး ... အောက်ကလင့်လေးတွေကတော့ Dialup Modem Howto တွေပါ.. အရင်ဖက်ကြည့်ပါခင်ဗျာ..
ဇော်ဂျီကီးဘုတ် preferences ကတော့ ခင်ဗျား သဘောပါ .. အဆင်ပြေသလိုထားနိုင်ပါတယ် ..
ကိုစေတန်ရေးထာတဲ့ Manual.pdf ရော .. ကျနော်ရေးထားတဲ့ Instruction.pdf ရောရှိပါတယ် .. အရင်ဆုံး keyboard indicator ကို Panel ပေါ်မှာတင်ပြီး အဲဒီကနေ Keyboard Preferences GUI နဲ့ သွားပြီး keyboard layout နဲ့ Third Level Switching keys တွေကို အဆင်ပြေလိုထားပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ် ..
GUI နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် command line နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းနိုင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် နှစ်ခုလုံးမှာ preferences options တွေတူတူထားပေးတာ ကောင်းပါတယ် ..
software installation ကတော့ ကျနော် ဒီဖိုရမ်မှာ ရေးထားပေးဖူးပါတယ် .. ဒီမှာပါ ..
ဒီ mz မှာ အစ်ကိုကြီးတွေ အစ်မကြီးတွေ ရေးထားပေးပြီးသားတွေ ရှိပါတယ် .. နောက်လာတဲ့ အသစ်ကလေးများ ပိုစ့်တစ်ခုတင်ပြီး မမေးခင် တချက်လောက် အချိန်ပေးရှာကြပါ ..
ကျနော်နားလည်ပါတယ် .. အင်တာနက်ကို ပိုက်ဆံပေးသုံးရတော့ အချိန်ကုန်ခံပြီး မရှာချင်တော့ပဲ .. သိချင်တာကို စွတ်မေးလိုက်ပြီး အဖြေကိုရယူတာမျိုးကပိုမြန်တဲ့ နည်းလမ်းပါ .. ဒါပေမယ့် အချိန်နည်းနည်းလေးပေးပြီး ပိုက်ဆံနည်းနည်းလေးပိုကုန်ခံပြီး အရင်ရှာစေချင်ပါတယ် ..
Linux ဆရာကြီးများ ခင်များ။
အခုမှ Linux စသုံးတာဆိုတော့ ဘာမှကို မသိသေးပါဘူး။
တနေ့က ညဖက်စက်ကိုသုံးပြီး sleep mode ကိုယောင်ပြီးနှိပ်လိုက်တာ။
ပြန်ဖွင့်တော့ အသံက ဘာသံတွေထွက်လာမှန်းမသိတော့ဘူး တဂျစ်ဂျစ်နဲ့ ထွက်လာတယ်။
.confg ဖိုင် ပြသနာတက်တယ်လို့ထင်တာပဲ။
အဲဒါ system restore ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ နည်းနည်းလောက်ပြောပြလို့ရမလား။
Window က Ubutun 8.10 ပါ
အင်း .. alsamixer မှာ တချက်လောက်စစ်ဆေးကြည့်ပါလား ..
ဖြစ်တက်တာက analog-line-out က off ဖြစ်နေတက်တယ် ..
ဒါမှမဟုတ် alsaconf ကနေ audio ကို reload ပြန်လုပ်ပေးကြည့်ပါလား ..
alsaconf ကို console ထဲမှာ root အနေနဲ့ run ပေးကြည့်ပါ..
alsaconf ကို မတွေ့ဘူးပြောလို့ရှိရင် which ကွန်မန်းဒ်နဲ့ရှာကြည့်နော် ..
$ which alsaconf
အဲဒါမှမရှိရင်သေးရင် alsa-base alsa-utils ကို install လုပ်ပေးရမယ်ထင်တယ် ..
Ubuntu မှာ alsamixer-gui ရှိမယ်ထင်ပါတယ် .. စိတ်မပူပါနဲ့လုပ်ကြည့်နော်
အကုန် လုပ်ကြည့်တယ် - မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။
Apr 307:06:33 sawyannaing-laptop gdm: pam_unix(gdm:session): session closed for user sawyannaing
Apr 307:09:45 sawyannaing-laptop gdm: pam_unix(gdm:session): session opened for user sawyannaing by (uid=0)
Apr 307:09:45 sawyannaing-laptop gdm: pam_ck_connector(gdm:session): nox11 mode, ignoring PAM_TTY :0
Apr 307:09:45 sawyannaing-laptop gdm: gnome-keyring-daemon: couldn't lookup keyring component setting: Failed to contact configuration server; some possible causes are that you need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due toasystem crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. (Details -  1: Failed to get connection to session: dbus-launch failed to autolaunch D-Bus session: No protocol specified
Apr 307:09:45 sawyannaing-laptop gdm: Autolaunch error: X11 initialization failed.
Apr 307:09:45 sawyannaing-laptop gdm: )gnome-keyring-daemon: couldn't lookup ssh component setting: Failed to contact configuration server; some possible causes are that you need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due toasystem crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. (Details -  1: Failed to get connection to session: dbus-launch failed to autolaunch D-Bus session: No protocol specified
Apr 307:09:45 sawyannaing-laptop gdm: )gnome-keyring-daemon: couldn't lookup pkcs11 component setting: Failed to contact configuration server; some possible causes are that you need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due toasystem crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. (Details -  1: Failed to get connection to session: dbus-launch failed to autolaunch D-Bus session: No protocol specified
Apr 307:09:45 sawyannaing-laptop gdm: )
Apr 307:17:01 sawyannaing-laptop CRON: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr 307:17:01 sawyannaing-laptop CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Apr 307:25:32 sawyannaing-laptop gdm: pam_unix(gdm:session): session closed for user sawyannaing
Apr 316:52:48 sawyannaing-laptop gdm: pam_unix(gdm:session): session opened for user sawyannaing by (uid=0)
Apr 316:52:48 sawyannaing-laptop gdm: pam_ck_connector(gdm:session): nox11 mode, ignoring PAM_TTY :0
Apr 316:52:49 sawyannaing-laptop gdm: gnome-keyring-daemon: couldn't lookup keyring component setting: Failed to contact configuration server; some possible causes are that you need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due toasystem crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. (Details -  1: Failed to get connection to session: dbus-launch failed to autolaunch D-Bus session: No protocol specified
Apr 316:52:49 sawyannaing-laptop gdm: Autolaunch error: X11 initialization failed.
Apr 316:52:49 sawyannaing-laptop gdm: )gnome-keyring-daemon: couldn't lookup ssh component setting: Failed to contact configuration server; some possible causes are that you need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due toasystem crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. (Details -  1: Failed to get connection to session: dbus-launch failed to autolaunch D-Bus session: No protocol specified
Apr 316:52:49 sawyannaing-laptop gdm: )gnome-keyring-daemon: couldn't lookup pkcs11 component setting: Failed to contact configuration server; some possible causes are that you need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due toasystem crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. (Details -  1: Failed to get connection to session: dbus-launch failed to autolaunch D-Bus session: No protocol specified
Apr 316:52:49 sawyannaing-laptop gdm: Autolaunch error: X11 initialization failed
ဒါကတော့ auth.log ထဲက
Apr 307:13:59 sawyannaing-laptop ntfs-3g: Version 1.2506 external FUSE 27
Apr 307:13:59 sawyannaing-laptop ntfs-3g: Mounted /dev/sda5 (Read-Write, label "DATA", NTFS 3.1)
Apr 307:13:59 sawyannaing-laptop ntfs-3g: Cmdline options: rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,locale=en_SG.UTF-8
Apr 307:13:59 sawyannaing-laptop ntfs-3g: Mount options: rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,silent,allow_other,nonempty,relatime,fsname=/dev/sda5,blkdev,blksize=4096
Apr 307:13:59 sawyannaing-laptop hald: mounted /dev/sda5 on behalf of uid 1000
Apr 307:14:31 sawyannaing-laptop anacron: Job `cron.daily' started
Apr 307:14:31 sawyannaing-laptop anacron: Updated timestamp for job `cron.daily' to 2009-04-03
Apr 307:17:01 sawyannaing-laptop /USR/SBIN/CRON: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Apr 307:25:32 sawyannaing-laptop kernel: [  996.775120] compiz.real: segfault at 193 ip 08055c8c sp bfd26430 error4in compiz.real[8048000+34000]
Apr 307:25:32 sawyannaing-laptop init: tty4 main process (4546) killed by TERM signal
Apr 307:25:32 sawyannaing-laptop init: tty5 main process (4547) killed by TERM signal
Apr 307:25:32 sawyannaing-laptop init: tty2 main process (4550) killed by TERM signal
Apr 307:25:32 sawyannaing-laptop init: tty3 main process (4551) killed by TERM signal
Apr 307:25:32 sawyannaing-laptop init: tty1 main process (5488) killed by TERM signal
Apr 307:25:32 sawyannaing-laptop init: tty6 main process (4554) killed by TERM signal
Apr 307:25:34 sawyannaing-laptop kernel: [  998.485189] apm: BIOS not found.
Apr 307:25:38 sawyannaing-laptop bluetoothd: bridge pan0 removed
Apr 307:25:38 sawyannaing-laptop bluetoothd: Stopping SDP server
Apr 307:25:38 sawyannaing-laptop bluetoothd: Exit
Apr 307:25:38 sawyannaing-laptop avahi-daemon: Got SIGTERM, quitting.
Apr 307:25:38 sawyannaing-laptop avahi-daemon: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.104.
Apr 307:25:38 sawyannaing-laptop exiting on signal 15
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop syslogd 1.5.0#2ubuntu6: restart.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: Inspecting /boot/System.map-2.6.27-11-generic
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: Cannot find map file.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: Loaded 52450 symbols from 97 modules.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Linux version 2.6.27-11-generic ([email protected]) (gcc version 4.3.2 (Ubuntu 4.3.2-1ubuntu11) ) #1 SMP Thu Jan 29 19:24:39 UTC 2009 (Ubuntu 2.6.27-11.27-generic)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e3000 - 0000000000100000 (reserved)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007f7a0000 (usable)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000007f7a0000 - 000000007f7ae000 (ACPI data)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000007f7ae000 - 000000007f7f0000 (ACPI NVS)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000007f7f0000 - 000000007f800000 (reserved)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] DMI 2.4 present.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] AMI BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working it around.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] last_pfn = 0x7f7a0 max_arch_pfn = 0x100000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] kernel direct mapping tables up to 38000000 @ 10000-15000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] RAMDISK: 3781d000 - 37fef776
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: RSDP 000F7FD0, 0024 (r2 ACPIAM)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: XSDT 7F7A0100, 007C (r1 _ASUS_ Notebook 10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: FACP 7F7A0290, 00F4 (r3 A_M_I_ OEMFACP  10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: DSDT 7F7A0640, C22B (r1  A8Le0 A8Le0001        1 INTL 20051117)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: FACS 7F7AE000, 0040
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: APIC 7F7A0390, 005C (r1 A_M_I_ OEMAPIC  10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: MCFG 7F7A03F0, 003C (r1 A_M_I_ OEMMCFG  10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: SLIC 7F7A0430, 0176 (r1 _ASUS_ Notebook 10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: BOOT 7F7A05B0, 0028 (r1 A_M_I_ OEMBOOT  10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: ECDT 7F7A05E0, 0054 (r1 A_M_I_ OEMECDT  10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: OEMB 7F7AE040, 0060 (r1 A_M_I_ AMI_OEM  10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: HPET 7F7AC870, 0038 (r1 A_M_I_ OEMHPET  10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: GSCI 7F7AE0A0, 2024 (r1 A_M_I_ GMCHSCI  10000725 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: ATKG 7F7B02D0, 8024 (r1 A_M_I_  OEMATKG  5000702 MSFT       97)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 7F7B8CB0, 04E6 (r1  PmRef    CpuPm     3000 INTL 20051117)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] 1143MB HIGHMEM available.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] 896MB LOWMEM available.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   mapped low ram:0- 38000000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   low ram: 00000000 - 38000000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   bootmap 00011000 - 00018000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0038000000]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   #1 [0000001000 - 0000002000]    EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   #2 [0000006000 - 0000007000]       TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   #3 [0000100000 - 00005c29e0]    TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00005c29e0]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   #4 [003781d000 - 0037fef776]          RAMDISK ==> [003781d000 - 0037fef776]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   #5 [00005c3000 - 00005c6000]    INIT_PG_TABLE ==> [00005c3000 - 00005c6000]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   #6 [000009fc00 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   #7 [0000010000 - 0000011000]          PGTABLE ==> [0000010000 - 0000011000]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   #8 [0000011000 - 0000018000]          BOOTMAP ==> [0000011000 - 0000018000]
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] 000ff780
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Zone PFN ranges:
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x00038000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   HighMem  0x00038000 -> 0x0007f7a0
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Movable zone start PFN for each node
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] early_node_map active PFN ranges
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0007f7a0
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] On node0totalpages: 522031
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c048c680, node_mem_map c1000240
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   DMA zone: 3947 pages, LIFO batch:0
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   Normal zone: 223300 pages, LIFO batch:31
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 290194 pages, LIFO batch:31
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] IOAPIC: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus0bus_irq0global_irq2dfl dfl)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus0bus_irq9global_irq9high level)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] SMP: Allowing2CPUs,0hotplug CPUs
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e3000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e3000 - 0000000000100000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 7f800000:7f600000)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] PERCPU: Allocating 41628 bytes of per cpu data
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] NR_CPUS: 64, nr_cpu_ids: 2, nr_node_ids 1
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 517441
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Kernel command line: root=UUID=bf258c7f-77c1-4b64-bd1a-6f0388344d8a ro quiet splash
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Initializing CPU#0
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Extended CMOS year: 2000
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] TSC: PIT calibration confirmed by PMTIMER.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] TSC: using PIT calibration value
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.000000] Detected 1728.983 MHz processor.
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000] Console: colour VGA+ 80x25
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000] console [tty0] enabled
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000] Memory: 2055056k/2088576k available (2576k kernel code, 32200k reserved, 1165k data, 424k init, 1171072k highmem)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000] virtual kernel memory layout:
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000]     fixmap  : 0xffc77000 - 0xfffff000   (3616 kB)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000]     pkmap   : 0xff400000 - 0xff800000   (4096 kB)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000]     vmalloc : 0xf8800000 - 0xff3fe000   ( 107 MB)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf8000000   ( 896 MB)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000]       .init : 0xc04ad000 - 0xc0517000   ( 424 kB)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000]       .data : 0xc03840da - 0xc04a7680   (1165 kB)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000]       .text : 0xc0100000 - 0xc03840da   (2576 kB)
Apr 316:52:28 sawyannaing-laptop kernel: [    0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
ဒါကတော့ syslog ထဲက....ဘာမှားနေလည်း နည်းနည်း ကူကြပါဦးလို့...
အင်း ပြသာနာတော့ စပြီ .. ကျနော်လဲ မကြုံဖူးတော့ ပြောရခက်တယ်၊ သေသေချာချာ google ကြည့်ပါအုံးလား၊ ဒါမှမဟုတ် ubuntu forum မှာမေးထားလိုက်ပါလား၊ အဲဒီမှာဆိုရင် အဖြေရဖို့ကမြန်မယ်ထင်ပါတယ် ..ကံကောင်းပါစေ ..
အစအဆုံးပဲ window reinstall ပြန်လုပ်ရင်ပဲ ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်။
အခွေတော့ပါလာတယ်။ သိရင် ဘယ်ပုံဘယ်နည်း window reinstall ပြန်လုပ်ရမလဲ ပြောကြည့်ပါလား။
window reinstall လို့ ပြောတာကို Ubuntu reinstall လုပ်တာလို့နားလည်လိုက်မယ်နော်..
လွယ်ပါတယ် .. အောက်ကလင့်လေးမှာကြည့်လိုက်နော် .. အဲဒါပြောတာထင်ပါတယ်
Ubuntu သွင်းပြီးသားကို နောက်တခါ ပြန်သွင်းတာဆိုတော့ partition ရွေးတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြစ်နေမလည်းမသိဘူးနော်။ အသွင်းမတော်လို့ Window Vista ဘာပါသွားရင် ရွာပတ်နေမှာ ကြောက်လို့။
နောက်တစ်ခါပြန်သွင်းရင် သူမေးတဲ့နေရာမှာ တစ်ချက် သတိထားကြည့်လိုက်။ သူကဘယ်နေရာမှ Install လုပ်မှာလဲဆိုရင် Remove all Linux Partition လို့မေးလိမ့်မယ်။:39: အဲ့ဒါကိုပဲ သူက Default ရွေးပြီးသားပါ။ မကြောက်ပါနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ လျောက်မရွေးလိုက်နဲ့ အရွေးမတော်ရင် Remove all partition ဖြစ်သွားရင် အကုန်ပြောင်သွားမယ်။:D
ဟုတ်ကဲ့ ...အခုပဲ စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ကျေးဇူးပါ
ကျနော်ကျတော့ အဲလို windows ရော ubuntu ရောသွင်းထားတဲ့စက်မှာ ubuntu ပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်.. Gparted Live CD နဲ့ Ubuntu Partitions အားလုံးကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ Windows Partition ကို Hard disk ပမာဏအပြည့်ပြန်ပြီး Resize လုပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့မှာ Ubuntu CD နဲ့ပြန်ပြီး အသစ် Install လုပ်တယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အဲလို Ubuntu ကိုပြန်မသွင်းခင်မှာ Windows Installer CD နဲ့ mbr ကိုအရင်ဆုံး fix လုပ်ပေးပြီး .. Windows boot ပြန်တက်မတက် အလုပ်လုပ်မလုပ်အရင် control လုပ်ပြီးမှ Ubuntu CD နဲ့ အသစ်ပြန်သွင်းလေးရှိတယ်။ အဲဒီလိုလေးက ပိုပြီးသပ်သပ်ရှိတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီ Gparted Live CD ဆိုဒါကို ဘယ်နားကနေ သွားယူရမှာလည်း။
ကျနော် Dual Boot မလုပ်ခင် 5GB လောက်ပဲ shrimp လုပ်ပြီး သုံးတာဆိုတော့
Clean up လုပ်တဲ့အခါ အဲဒီ 5GB ပဲ clean ဖို့ လိုမှာပေါ့နော်။
ကျနော်က ထုံတော့ step by step မှပဲ လုပ်တက်မယ်ထင်တယ်။
ဒီအောက်ကလင့်ကတော့ Gparted Live CD ကို download လုပ်ဖို့လင့်ပေးထားတာပါ
အဲဒီလင့်ကနေသွားပြီး Gparted website ကိုသွားပြီး ဒေါင်းလုတ်လုပ်နော်
ပြီးရင် ရလာတဲ့ iso ကို CD burn လိုက်ရင် Live CD ကိုရလာမယ်။ အဲဒီစီဒီနဲ့ boot တက်ပြီး ubuntu partitions တွေကို ဖျက်ထုတ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် Windows Partiton ကို Hard Disk size အပြည့် Resize ပြန်လုပ်လိုက်နော်၊ အဲဒါပြီးရင် Gparted GUI ကို Exit လုပ်ပြီးထွက်လိုက်ရင် Gparted Live CD က eject ဖြစ်လာမယ်၊ အဲဒီအခါမှာ တလက်စတည်း Windows Installer CD ရှိရင် ထည့်ပေးပြီး Windows CD နဲ့ setup boot တက်လိုက် ..
ပြီးရင် Install လုပ်မလား Repaire လုပ်မလားမေးရင် Repair Option ကိုရွေးဖို့ R ကိုနှိပ်ပေးလိုက် (Windows Vista Install CD မှာတော့ ကျနော် မသိပါ ဘယ်လို options မေးတယ်ဆိုတာ) ၊ အဲဒီ mbr ကို fix ဖို့အတွက်လဲ အောက်ကလင့်လေးကိုသွားလိုက်နော်
အဲဒါတွေပြီးလို့ Windows ပြန်တက်လာပြီးဆိုရင် Windows ကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့ Ubuntu CD နဲ့စပြီး install လုပ်နိုင်ပါပြီး Ubuntu Installer Guide အတိုင်းသွားပြီး အမေးအဖြေသေချာလုပ်ပြီး ကိုယ်ထားချင်တဲ့ Partiton size, user name, password, time, keyboard စတာတွေကိုသေချာလေးဖြေသွားရင်း စိတ်အေးလက်အေးလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Ubuntu Installer က ခင်ဗျားကို အကူအညီတွေပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါမှ ဂွပဲ။ Laptop ရောင်းတဲ့ဆိုင်က Vista CD မထည့်ပေးလိုက်ဘူးဗျ...product Key ပဲ ပေးလိုက်တယ်။ အစ်ကိုပြောသလိုဆို Vista CD ပါမှ ရမှာပေါ့နော်။
ဟဟ vista ရောက်သွားပြန်ပီ
ဖြေတဲ့ သူ မြက်စိလည်လောက်ပီ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရသလောက်ပဲ လုပ်ထားကြည့်လိုက်ဦးမယ်။...နောင်ခါလာ နောင်ခါစျေးပေါ့....Laptop က Warrenty ကျန်သေးတယ်။ ဖျက်နိုင်သလောက်ဖျက်ပြီးမှ ဆိုင်သွားပြမယ်။...:67:
Windows CD မရှိပဲနဲ့လဲ စမ်းကြည့်လေနော် ..
partition ကို Resize ပြန်လုပ်ပြီးတဲ့အဆင့်ပြီးရင် mbr ကို fix လုပ်မနေတော့ပဲ ubuntu cd ထည့်ပြီးတော့ install လုပ်ကြည့်လေနော် .. ရမယ်ထင်ပါတယ် ..
ဟုတ်ကဲ့...စမ်းကြည့်မယ်...ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပါ တပါတည်း အကြောင်းကြားပါ့မယ်။...မလုပ်ခင် ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ်ဘူး Hard Disk ကို image လုပ်ထားရင်ကောင်းမလားမသိဘူး။
Backup လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ အဲဒါ ဘယ်ဟာကို Recommend မလဲ။
P.S / Topic ကနေ အတော်ကို ချောတောငေါ့သွားပြီး Admin များ သင့်တော်မဲ့နေရာ ရွေ့ပေးပါ....အနော့်ကို ဘေးမယ့်ပေးပါ...
Ubuntu CD နဲ့ပဲ boot တက်ပြီးတော့ install မလုပ်သေးပဲ .. "Try without ... " နဲ့ Live တက်ပြီးတော့ Ubuntu Desktop ပေါ်ရောက်ရင် Windows Partition ရော .. ကျန်တဲ့ Partition တွေရောအကုန်တွေ့မှာပါ .. အဲဒီအခါကျ လိုအပ်တဲ့ Directories တွေ files တွေကို External hdd ထဲဖြစ်ဖြစ် windows partition ထဲပဲဖြစ်ဖြစ် ကူထည့်လိုက်လေနော် .. စိတ်အချရဆုံးက External Disk ထဲကို ကူးထည့်ထားလိုက်တာပဲ..
ကို Box02 ရေ...အခုပဲ Gparted .iso ကို Burn ပြီး Boot လုပ်တာ Window ပဲတက်လာတယ်။
အဲဒါ Burn တဲ့ Method ပဲမှားနေတာလား မသိဘူးနော်။
My bad..I burn it as Data CD instead of Image...:D
:112: အဟီး .. !! နောက်ပြီးမမေ့နဲ့အုံး BIOS setting မှာ CD drive ကို First boot ပေးလို့လဲမမေ့နဲ့အုံး.. တော်ကြာ CD ကို boot မလုပ်ပဲနဲ့ .. windows ပဲထက်တက်လာအုံးမယ်..:112:
ကိုဘောက်ရေ အခုတော့ အိုကေတယ် ဒါပေမယ့် Partation အလုပ်မတော်တော့ Ubuntu မှာ ၁.၂ဂစ်ပဲရှိတယ်....အဲဒီတော့ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရင်ကောင်းမလည်း နောင်တော်ကြီးရယ်။ ခေါ်င်းခွဲ စဉ်းစားပေးပါဦး....:D
ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် စုံစိ အောင် မေးတဲ့ အကိုရယ်
စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြေပေးတဲ့ အကိုရယ် ဆိုတော.
gpared နဲ့ resize ပြန်လုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်။ အခြားတစ်ခုကဟာကို အရင် resize လုပ်။ ပြီးရင် ဒီဘက်က ဟာမှာ ပြန်ပြီး တိုးပေါ့...
ကို စေတန် စာလုံးပေါင်းမှားနေလို့ ဝင် ပြင်လိုက်အုံးမယ်။
GParted ။ gpared ဆိုတော့ t ကျန်ခဲ့တာပေါ့။
ကျွန်တော် ubuntu ကို ပြန်သွင်းပြီးသုံးကြည့်တယ်။
Update လုပ်ပြီးသွားတော့..Myanmar font လက်ကွက်က ပြောင်းသွားတယ်။ ပုံမှန် zawgyi
ပဲသုံးနေတော့..ရိုက်ရတာ အဆင်မပြေဘူး..။ (:((
Minimize, close, Maximize button တွေပါတဲ့ title ဘားပျောက်သွားတယ်။ အဲဒါက
Compizconfig Settings Manager မှာ ကလိပြီး..restart ချလိုက်တယ်.။ ပြန်တက်လာတော့
bar က ပျောက်သွားပြီ..။ အဲဒီ bar မရှိတော့ Move လုပ်ချင်ရင် Alt ကြီးဖိပြီး ရွှေ့နေရတယ်။
ဟုတ်တယ် ဒီကောင်တွေတော်တော်ဆိုးတယ် ကျုပ်လည်းတစ်ခါခံရပြီးပြီ ခင်ဗျား လွယ်လွယ်ကူကူ ရှင်းချင်ရင်တော့ zawgyi Keyboard ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ထည့်လိုက်။
System -> Preferences -> Appearance -> Visual Effects ကို None လုပ်ပြီးတော့ အရင်ကရွေးထားတဲ့ဟာကို ပြန်ရွေးကြည့်ပါလား .. ဆိုလိုတာက Visual Effects > Turn Off and then Turn On လုပ်ကြည့်တာပေါ့ ..
Keyboard ပြသာနာကတော့ zawgyi keyboard ကို ကိုလူပျိုကြီးပြောခဲ့သလိုပဲပြန်သွင်းကြည့်လေနော် .. အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်
System -> Preference -> Keyboard ကိုသွားပြီး check box တွေကို uncheck & check ပြန်လုပ်ပေးလေနော် .. Turn off & Turn on လုပ်တာပါပဲ
Visual Effects ကို None ပေးလိုက်ရင် ပြန်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့.. Visual effect နဲ့ဆိုရင် ရော
်font ကတော့ ပြန်သွင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့..မရဘူး.
Visual Effects ကို None ပေးလိုက်ရင်ပြန်ရတယ် ဟုတ်ပြီ .. အဲဒါဆိုရင် Turn On ပြန်လုပ်ကြည့်လေ .. ပြန်ရမယ်ထင်ပါတယ် ..
zawgyi ကိုဘယ်လို install လုပ်ထားလဲ .. debian package ကနေသွင်းခဲ့မယ်ဆိုင်ရင် သူ့ကို remove အရင်လုပ်လိုက် ပြီးမှ install ပြန်လုပ် .. ပြီးရင် keyboard preferences သွားပြီး အရင် myanmar layout ကို remove လုပ်ပြီး အသစ်ပြန် Add ပေးကြည့်လေနော် ..
Visual effect ပြန်ထည့်လိုက်ရင်..မရတော့ဘူ..ပြန်ပျောက်သွားတယ်
zawgyi keyboard ကို
sudo apt-get remove zawgyi-keyboard
Package zawgyi-keyboard is not installed, so not removed
ဇော်ဂျီ ကတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ..။
အခုမရတာက..close,minimize,maximize button ပါတဲ့ bar က မရသေးဘူး.
sudo aptitude purge ubuntu-desktop && sudo aptitude clean && sudo aptitude update && sudo aptitude install ubuntu-desktop && sudo /etc/init.d/gdm restart
ဒါလေးကို အရင် run ကြည့်ပါအုံးနော်
ကို run ပေးလိုက် .. ဒါမှမဟုတ် emerald ကို Synaptic Package Manager မှာ Search ပြီးတော့ install လုပ်ပေးလိုက်နော် .. ပြီရင်
CompizConfig Settings Manager ကိုပြန်သွားပြီး Window Decoration icon ကို click လုပ် ပြီးရင် အဲဒီမှာ "emerald" ကို Command dialog box ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေနိုင်တယ် ..
resize လုပ်တဲ့အခါ ဘယ် Format နဲ့ resize ပြန်လုပ်ပြီး Ubuntu ကနေ ဘယ်လို ပြန်တိုးရမှာ လဲ....
gparted နဲ့ boot တက်လိုက်လေ... ပြီးရင်တော့ partition ကို အဲမှာ resize လုပ်လို့ရတယ်။ မရရင်တော့ format ဖြစ်ဖို့ပဲ များတယ်..
Hard disk မှာ Partitions တွေက ဒီအောက်ကလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ် ..
# ---Ubuntu Part.-- #
Windows က NTFS တစ်ခုလုံးကိုယူထားပြီး
Ubuntu မှာက ext3 နဲ့ swap ရှိတယ် .. အဲဒီနှစ်ခုက Extended အပေါ်မှာရှိနေတယ်။
အဲဒီတော့ Resize လုပ်မယ်ဆိုရင် Windows Partition [NTFS] ကိုအရင်ဆုံး ချုံ့လိုက်ပါ။
Ubuntu အတွက်ဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုတာမှန်းပြီးတော့ NTFS ကိုအရင်ချုံ့နော် ..
ပြီးရင် Extended Partition ကိုချဲ့ထုတ်မယ် .. ခဏကချုံ့ထားတဲ့ NTFS ရဲ့အဆုံးနဲ့ကပ်ရပ်အထိ ဆွဲချဲ့မယ်။ ပြီးရင် ext3 ကိုပါလိုက်ချဲ့ပေးမယ်။ Swap ကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ RAM memory နဲ့ နှစ်ဆလောက်ထားထားပေးရင်လုံလောက်ပါတယ်။ RAM size ပေါ်မှာလဲ မူတည်သေးတယ်။ ဥပမာ RAM က 512 MB ပဲရှိတယ်ဆိုရင် 1 GB လောက်ထားပေးလိုက် အကယ်လို့ RAM က 1 GB ဆိုရင် Swap ကို 1.5 GB လောက်ထားရင်လဲလုံလောက်ပါတယ်။
ပိုပြီးသိချင်ရင် https://help.ubuntu.com/community/SwapFaq မှာသွားဖတ်ကြည့်နော်
emerald ကို install လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပြီ..။ကျေးဇူးပဲအစ်ကို.။
ဒါနဲ့.အပေါ်က run ခိုင်းတဲ့ ဟာက ဘာအတွက်လဲမသိဘူးနော်..။
ကျွန်တော် run လိုက်တော့..install လုပ််တယ်ဗျာ..။ အဲတ၀က်တပျက်ကြီးမှာ..စက်က အမဲရောင် screen ကြီးတက်လာတယ်။ ပီးတော့ ဘာမှမပေါ်တော့ဘူး..။ ဒါနဲ့စက်ကို ပိတ်လို်က်ရတော့တယ်..
အပေါ်က commands အစုကိုပြောတာလား .. အဲဒါကို ubuntu-desktop ကို clean ထုတ်ပြီး အသစ်ပြန် install လုပ်တာပါ၊ ပြီးတော့ တဆက်ထဲ gnome desktop ကို restart လုပ်ခိုင်းတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ desktop က ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ messy ဖြစ်သွားရင် ဒီ commands အစုလေးနဲ့ ပြန်ပြီး clean install ပြန်လုပ်တာပါ။
အဲဒါကို emerald install လုပ်ပြီးမှ လုပ်လိုက်တာလား ..
ခု ပြန်မတက်လာတော့ဘူးလား :O .. sorry ကွယ် :2:
emerald install မလုပ်ခင် လုပ်လိုက်တာပါ..။ စက်ကပြန်တက်ပါတယ်..။ ဘာမှမဖြစ်ဘူး.။
ဟုတ် .. အဲလိုမေးတာကောင်းပါတယ်။ စက်ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ အိုကေနော်
အရင် Ubuntu မဖျက်ခင် သို့တည်းမဟုန် ကောင်းနေချိန်တုန်းက Wireless က အလုပ်လုပ်တယ်။ အခု Update တွေလုပ်ပြီးတာတောင် wireless က အလုပ်မလုပ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါ လူကြီးမင်းများ အကြံပြုကြပါ။ Sympathetic ထဲမှာ တော့ သွားမရှာကြည့်ရသေးဘူး။ ခုဆို Window ကနေပဲ တက်ဖက်နေရတယ်။
ကျနော်က wifi သုံးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် လက်တလော wifi နဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြံနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ကလင့်လေးကို ကြည့်လိုက်နော်
Portable Ubuntu ဆိုတာလေး ထွက်တယ်ခင်ဗျ။ သူက Windows ပေါ်မှာ additional tools ပုံစံနဲ့ဗျ။ Desktop ပေါ်မှာ ubuntu menu bar လေးပဲ ပေါ်တယ်။ ကျန်တာတွေက တော့ ရှိတဲ့ windows အတိုင်းပဲဗျ။ အောက်ကလင့်မှာ သေချာရေးပေးထားပါတယ်။
သွင်းနည်းကတော့ ကွန်မန်း ကနေသွင်းရတယ်။ ကျနော်လည်း အခုမှ စမ်းကြည့်နေတယ်။ အဆင်ပြေရင် သွင်းနည်းပါရေးပေးပါ့မယ်။
အောင်မလေး အခုမှပဲ အဆင်ပြေသွား တော့တယ်။ Gparted က ချံူ့ တာတော့ အစဉ်ချော်တယ်။ ချဲ့တဲ့အခါ ပြသနာတက်ပါလေရော။ ဒါနဲ့ ကျနော် Linux အကုန်လုံး ဖျက်ချပြီး Window ကြီးပဲထားပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ GRUB ဆိုပြီး Error တက်ပါလေရော။ ကိုစေတန်ပြောသလိုပဲ format ပဲ အကုန်ပြန်ချမလားပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ စွတ်စွတ်ရွတ်ရွတ် Ubuntu CD ကောက်ထည့်ပြီး တင်ကြည့်လိုက်တယ်။ အဲ...သူနဲ့ကျတော့ ကနော့ Vista ကို အစာအနာ မရှိ ပြန်မြင်ရလို့ စိတ်အတော်အတန်ချမ်းသာသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ Dual Boot ပုံစံလေးအတိုင်း ပြန်တင်လိုက်တာ အစဉ်ပြေတယ်။ အခုတော့ Ubuntu မှာ ၃၅ ဂစ်တောင် ဖြစ်သွားတယ်ဗျို့။ ထုံးစံအတိုင်း Wireless ကတော့ ဟိုဟာစမ်း ဒီဟာစမ်းနဲ့ စမ်းတ၀ါး၀ါး ရမ်းသမ်းလုပ်တုန်းပဲ။ အချိန်လည်း သိပ်မပေးနိုင်ဘူးလေ။ အလုပ်တွေသိပ်ရှုပ်တယ် ချစ်သူက အခုမှ အလုပ်တွေဖိလုပ်ခိုင်းနေတယ်။ နောက်မှပဲ Ubun ပြန် တူး နိုင်တော့မယ်။....